Dawladda oo beenisay inay jiraan maleeshiyaad abaabulan oo doorashada ka soo horjeeda. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dawladda oo beenisay inay jiraan maleeshiyaad abaabulan oo doorashada ka soo horjeeda.
Dawladda oo beenisay inay jiraan maleeshiyaad abaabulan oo doorashada ka soo horjeeda.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta XFS mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar (Al-cadaala) ayaa sheegay inay been abuur yihiin muuqaallo maalmahan lagu baahiyey baraha bulshada iyo saxaafadda qaarkeed, kuwaas oo lagu sheegay inay yihiin maleeshiyaad doorashada ka soo horjeeda oo duleedka Muqdisho isku abaabulaya.
Al-cadaala ayaa xusay in muuqaalka la baahiyey uu yahay mid hore oo loo duubay ujeedda ka duwan tan lagu sheegay, ciidamada ka muuqdana aysan ahayn fallaago u abaabulan inay amni darro abuuraan.
Waxa uu u jeediyey warbaahinta iyo dadka sida ka fiirsi la’aanta ah muuqaaladaas la marin habaabiyey iyo kuwa la mid ka ah baahinaya, inay ka dhawrsadaan macluumaad aysan hubin inay faafiyaan, kaas oo si sahal ah ku abuuri kara amni darro, taas oo dhaawacaysa amniga Qaranka, sharafta ciidanka iyo shacabka Soomaaliyeed.
“Colaad hurintu ma aha dimuquraadiyad, been sheegistuna maaha madaxbanaan” ayuu yiri mudane Al-cadaala.
Muuqaalada lagu baahiyey Telefeshinada maxaliga ah qaarkood iyo baraha bulshada ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay aad ugu faafay bulshada dhexdeeda, kuwaas oo ay ka muuqdeen ciidamo aan isku dhar ahayn oo wata gaadiid dagaal.
Previous articleShirka madasha iskaashiga Ganacsiga Beeralayda Dalka oo berri ka furmayo Muqdisho.
Next articleWasiirka Warfaafinta XFS oo la kulmay Danjiraha Shiinaha ee Soomaaliya+(SAWIRRO).
Xubno ka tirsan argagaxisada Al-shabaab oo lagu dilay duqeyn ka dhacday nawaaxiga Jamaame
Goob qashinka lagu keydiyo oo laga hirgeliyay duleedka magaalada Jowhar+(SAWIRRO)
Guddoomiye Cumar Filish oo kormeeray dhismaha waddada dheer ee isku xirta isgoysyada Afarta darjiino iyo Maanabolyo+(SAWIRRO).
Xubno ka tirsan argagaxisada Al-shabaab oo lagu dilay duqeyn ka dhacday...
Guddoomiye Cumar Filish oo kormeeray dhismaha waddada dheer ee isku...